Gọzie Mobile bụ MMORPG ọhụrụ na mwakpo akpaka | Gam akporosis
O doro anya na egwuregwu dika Ghazie Mobile bu ihe ohuru site na inye MMORPG ma akpaka. Ma ọ bụ na ịkpọ ụdị egwuregwu ndị a site na ekwentị na-eme site n'echiche ọzọ ma ọ bụ ụzọ nghọta ha; Na-amalite ya maka nkeji ole na ole, ị na-eme ụfọdụ ọrụ na-akpaghị aka na ị na-elekwasị anya na nhọrọ mmekọrịta gị na ndị ọzọ iji soro ndị ọzọ na-aga n'ihu na-amụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ.
Ya mere ị nwere ike mma ịghọta ihe mere egwuregwu nke anyị na-agaghịkwa na-achọ ndị ọzọ na obodo ma ọ bụ obodo nta, ma ọ bụ na anyị enweghị iji nzube anyị dị ike tabulator (dịka anyị mere PC na WoW), bụ omume doro anya; ee ee enwere ụfọdụ MMO ndị maara ka esi eji akpaaka eme ihe.
1 Mgbe onye ọrụ ibe gị kachasị mma bụ bọtịnụ «ite egwú»
2 Omume dị ọcha nke Ngọzi Mobile
3 Mgbanwe nke ọma emere nke ọma
Mgbe onye ọrụ ibe gị kachasị mma bụ bọtịnụ «ite egwú»
Gozie Mobile na-ewetara anyị ezigbo MMO mara ezigbo mma ọbụlagodi mgbe anyị na-ahọrọ ime ka enyo ahụ buru ibu, ma lelee nkọwa nke ọgụ anyị na-alụ ọgụ megide ụdị ndị iro na anụ ọhịa niile.
Mana ee eji akpaka nke mere na site na mmalite nke egwuregwu Ka pịa na otu nke ọzọ na ọ na-amalite na-akpụ akpụ na-enweghị anyị na-enweghị ihe ọ bụla. Ihe niile ga - eme na akpaghị aka ka anyị wee pịa akụrụngwa ọhụrụ iji kwadebe ya ma ọ bụ pịa na bọtịnụ “egwu” iji gafee ebe nkiri ahụ nke akụkọ ahụ na-agwa anyị.
Ee ee, nke ahụ bọtịnụ ga-abụ ezigbo onye ọrụ gị ebe ọ bụ na ị gaghị akwụsị ịpị ya iji gaa n'ihe masịrị gị, kwalite iji melite ma nwee ike ịnụ ụtọ ọdịnaya nke na-echere gị na Ngọzi Mobile.
Omume dị ọcha nke Ngọzi Mobile
Ọ bụrụ na ị wụnye Bless Mobile te ị ga-amata na ha ewepụtala sava ọhụrụ na ndị ha na-enye ebe a na Europe juputara na egwuregwu. Ka anyị hụ, ka anyị dịrị, ọtụtụ n'ime ndị ochie MMORPGs eziokwu nke "egweri" (na-egbu ọtụtụ narị na narị otu narị ndị iro na-achịkwa site na kọmputa) bụ fọrọ nke nta ịta ahụhụ na-enwe ike larịị ma nweta na ọhụrụ agha ma ọ bụ nwere na ọhụrụ nkà na nke anyị nwere ike ichebe onwe anyị na PvP.
Ka ọ were N'ihi ngwa ngwa nke smartphones, usoro a dum Ọ na-eme na-akpaghị aka dị ka ndị ọzọ. Anyị ga-elekwasị anya na ihe ndị ọzọ na-atọ ọchị dị ka ịkụ azụ ma ọ bụ isonyere ezinụlọ Spanish nke anyị nwere ike izute ndị egwuregwu ndị ọzọ ma nwee ọ andụ.
M maara n'ezie ị ga-enwe ike iwu isi ụlọ ezinụlọ iji animate na show na ka anyị nwee a ozi. N'ihi na maka ndị ọzọ enwere ojiji nke injin na-enye oge dị egwu na nke nwere ike ịkpọrọ anyị site na gburugburu ebe dị iche iche iji mara akụkọ ihe mere eme.
Mgbanwe nke ọma emere nke ọma
Mgbe MMO ndị ọzọ na-esite n'otu obodo gaa n'obodo ọzọ na-esi na mgbago ugwu pụọ n'ọzara, na Bless Mobile anyị ga- nwere mgbanwe na-agbanwe agbanwe nke ọdịdị ala nakwa na ọ nwere ike iwepụta ndabere dị mkpa ka anyị wee chee na anyị nọ n'ụwa nke anyị.
Ọ bụ ebe a anyị na-egosipụta ọrụ dị ukwuu ejiri ihe odide ahụ rụọ na ikike ịhazi ya ka anyị wee nwee ike ịnụ ụtọ ịhọrọ etu avatar anyị ga-adị. N'agbanyeghị, ọ na-akọghị na nkà na-aghọ a ìhè show ọbụna na ala etoju; Anyị achọghịdị iche ihe ga - eme ma anyị nwetakwuo ọkwa ...
Bless Mobile bu MMO ohuru nke na-abanye na akpaka na-akpaghị aka ma na-egwu egwu site na iri puku kwuru iri puku ndị egwuregwu. Have nwere ya n'efu na ihe niile freemium na ikike ị nweta ụgwọ ọrụ okpukpu abụọ site na ịkpọ ọkọlọtọ mgbasa ozi.
Ọ bụrụ n ’ịnabata akpaaka ị nwere MMO igwu maka izu na ọnwa. A hapụrụ anyị na okike gị na gburugburu ebe obibi mara mma.
Eserese zuru oke
Nkọwa zuru oke na gburugburu na ihe odide
Nkà ndị pụrụ iche
Mepụta random ihu na agwa kere ihuenyo
Ọ bụghị n’asụsụ Spanish n’oge ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Gọzie Mobile bụ MMORPG ọhụrụ na ihe niile akpaka na ikpọ eserese
Ndepụta Fitbit dị ugbu a na Storelọ Ahịa Google